ग्राफिक डिजाइन को इतिहास: विकास र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरु | रचनात्मक अनलाइन
स्रोत: कार्यकारी महिला
ग्राफिक डिजाइन को रूप मा हामी जान्दछौं कि यो प्राचीन समय देखि अब सम्म हाम्रो एक हिस्सा भएको छ। जब हामी "ग्राफिक डिजाइन" भन्दछौं, हामी ग्राफिक संचार को पक्षहरु लाई तुरुन्तै दिमागमा आउँछ जब हामी चारैतिर बाट सचेत छौं: लेखन, प्रतीक, चित्र आदि। यसको इतिहास को एक स्थापित मिति छैन तर घटनाहरु को एक श्रृंखला द्वारा निर्धारित गरीएको छ कि यसको विकास सम्भव बनाएको छ।
स्थितिमा तपाइँ राख्न, हामी तपाइँलाई हस्तान्तरण गर्न जाँदैछौं XIX शताब्दी, घटनाहरु बाट भरीएको एक शताब्दी जुन पहिलो आन्दोलन शुरू भयो र यसैले पहिलो स्तम्भहरु थिए जहाँ डिजाइन निर्माण हुन थाल्यो जस्तो कि हामी आज देख्छौं।
तपाइँलाई चाहिने सबै चीज तयार गर्नुहोस् किनकि अस्थायी यात्रा शुरू हुन्छ।
1 मूल: पहिलो आन्दोलन र कलाकारहरु
1.1.1 चार्ल्स रेनी म्याकिन्टोश
1.1.3 पिटर behrens
1.2 Bauhaus स्कूल
1.2.1 पल क्ली
1.3.1 जीन कार्लु
1.4 १ 30 s० को दशक
1.5.1 अलेक्जेन्डर Rodchenko
1.6 युरोप मा 50s
1.7 अमेरिका मा 50s
1.7.1 पप कला
1.8 यूरोप मा 60 र 70 को दशक मा डिजाइन
1.9 अमेरिका मा डिजाइन (१ 60 s० र १ 70 s०)
1.9.1 मिल्टन ग्लेजर
1.10 ग्राफिक डिजाइन मा 80s
1.10.1 वोल्फगैang Weingart
1.11 आजको समाज मा ग्राफिक डिजाइन
मूल: पहिलो आन्दोलन र कलाकारहरु
महत्त्वपूर्ण घटनाहरु १ th औं शताब्दी मा हुन्छन्, ती मध्ये एक यस शताब्दी को अन्त्य मा शुरू भयो। पश्चिमी संस्कृति औद्योगिक क्रान्ति र प्रविधिको विकास द्वारा वातानुकूलित छ। यो जनसंख्या वृद्धि लाई प्रभावित गर्दछ र संचार मा एक अग्रिम को लागी अनुमति दिन्छ। ठूला उद्योगहरु छिटो उत्पादन को अनुमति दिन्छन् कि यसको परिणाम को रूप मा, उत्पादनहरु को artisanal मूल्य पुरा तरिकाले गिरिन्छ।
यो द्वन्द्व पछि त्यहाँ के समाधान हुन सक्छ? ठीक छ, यूनाइटेड किंगडम मा के हामी आज आन्दोलन को रूप मा जान्दछौं कला र शिल्प द्वारा कप्तान विलियम मोरिस। यो आन्दोलन कारीगर मूल्य फिर्ता ल्याउने उद्देश्य संग उठ्यो। दुर्भाग्यवश, उद्देश्य पुग्न सकेन तर यो आन्दोलन को धेरै महत्व थियो किनकि समयको समाजले उनीहरुलाई आफ्नै शैली को लागी र उनीहरुको कामहरुमा पल को संघर्ष को प्रतिनिधित्व गर्न को लागी मान्यता दियो। र त्यो कसरी आधुनिकतावाद।
तल हामी आधुनिकतावाद के हो र के यो यति धेरै विशेषताहरु को व्याख्या।
स्रोत: सामान्य संस्कृति
आधुनिकता पनि भनिन्छ कला नोव्यू, उन्नीसौं ढिलो र प्रारम्भिक बीसौं शताब्दी मा उभिएको छ। यो समय को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कलात्मक आन्दोलनहरु मध्ये एक मानीन्थ्यो र यसको संक्रमण को रूप मा पनि जानिन्छ Belle Epoque कि पहिलो विश्व युद्ध को शुरू सम्म चलेको थियो।
आधुनिकतावादी, कला र जीवन संग बाँचेका थिए र धेरै को दार्शनिक धाराहरु बाट प्रभावित थिए जोन रस्किन र प्रसिद्ध विलियम मोरिस, यथार्थवाद वा प्रभाववाद जस्तै आन्दोलनहरु को पूर्ववर्ती। आधुनिकतावादी विशेषताहरु को एक संख्या पूरा:
उनीहरु प्रकृति को तत्वहरु लाई आफ्नो कामहरु लाई बढाउन को लागी प्रयोग गर्छन्
उनीहरु प्राविधिक उन्नति पछि आफ्नो काम मा नयाँ सामाग्री को उपयोग
उनीहरु विषमता को अन्वेषण र आफ्नो काम मा प्रतिनिधित्व
आधुनिकतावाद मा कलाकारहरु को एक श्रृंखला जो डिजाइन र कला को दुनिया को लागी धेरै महत्वपूर्ण थिए उभिए।
चार्ल्स रेनी म्याकिन्टोश
चार्ल्स रेनी एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट र डिजाइनर थिए जो १1868 मा स्कटल्याण्ड मा जन्मेका थिए। उनी आफ्नो कामहरुमा ज्यादातर प्रयोग गर्ने ज्यामितीय आकृतिहरु र सीधा वा आरोही रेखाहरु हुन्। उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध कामहरु मा शामिल छन्: Peonies, किला र आर्मचेयर।
उहाँ एक चेक चित्रकार र कलाकार हुनुहुन्थ्यो र आर्ट नोव्यू को सबैभन्दा प्रतिनिधि कलाकारहरु मध्ये एक मानिन्छ। उहाँले फूल शैली को एक धेरै प्रयोग गर्दछ र आफ्नो काम मा महिलाहरु को प्रशंसा द्वारा विशेषता छ। जस्तै काम गर्दछ: राशि चक्र, चकलेट आदर्श र रोजगार सिगार बाहिर खडा।
पीटर एक दिन को ग्राफिक डिजाइनर, कर्पोरेट पहिचान, पोस्टर, र typefaces डिजाइन को लागी परिचित थियो। उहाँको शैली धेरै अजीब छ किनकि उनी अधिक कार्यात्मक र सफा डिजाइन को लागी देखीरहेका थिए। उनको कामहरु मा शामिल छ: इलेक्ट्रिक चिया र वन।
स्रोत: धेरै रोचक
उन्नाइसौं शताब्दी पछि, शताब्दी XX यो १ 1914 १४ मा प्रथम विश्व युद्ध द्वारा वातानुकूलित थियो। त्यो वर्ष मा Bauhaus स्कूल Weimar (जर्मनी) मा स्थापित भएको थियो। यो स्कूल को डिजाइन, कला र वास्तुकला को दुनिया मा धेरै प्रभाव थियो। धेरै कलाकार जो यस विद्यालय को गठन, रचनात्मक आन्दोलन बाट उठे र अध्ययन गर्न थाले फारम, सामाग्री, संरचना, ठाउँ र डिजाइन मा रंग को सबै महत्व माथि.
Bauhaus विकसित के हामी टाइपोग्राफिक पदानुक्रम को रूप मा जान्दछौं, जहाँ रेखाहरु, पट्टिहरु, बिन्दुहरु वा वर्गहरु लाई ठाउँ विभाजित गर्न र दर्शक को ध्यान राख्न को लागी प्रयोग गरीएको थियो। यसको केहि विशेषताहरु थिए:
आधुनिक सामग्री (गिलास) को उपयोग मा रुचि
क्यूबिस्ट र यसको भवनहरुमा असममित प्रवृत्ति
तिनीहरूले फारमहरुमा सादगी को उपयोग गरे (कम अधिक छ)
जैविक minimalism को लागी प्रवृत्ति
कलाकारहरु कि यो विद्यालय को हिस्सा हो:
उहाँ XNUMX औं शताब्दी को सबैभन्दा प्रभावशाली कलाकारहरु मध्ये एक मानीन्छ, अमूर्त को घटना मा काम गर्न को लागी बाहिर खडा छ र उनको कामहरु को बीच बाहिर खडा छ: बिरालो र चरा र महल र सूर्य।
उहाँ एक अभिव्यक्तिवादी, अमूर्त चित्रकार र रंग र डिजाइन को एक महान मास्टर हुनुहुन्थ्यो। रचना आठ र नीलो सवार बाहिर खडा।
कलाकार र गतिशील रचनाहरु को प्रभावशाली जहाँ उनले तेर्सो र ठाडो लाइनहरु संग काम गरे। उनको कामहरु को बीच मा छन्: व्यक्त पर्खाल र डबल एसेन्सन।
Moholy फोटोग्राफी र टाइपोग्राफी मा अधिक ध्यान केन्द्रित र अन्तरिक्ष Modulator जस्तै कामहरु को लागी बाहिर खडा छ।
युरोपेली देशहरु को बाकी मा आन्दोलनहरु पनि बनाईएको थियो। आयो आर्ट डेको, एक चरण मा जसमा आधुनिकतावाद को विशेषताहरु लाई प्रतिस्थापन गरीएको थियो सरल र सीधा लाइनहरु।
कला डेको व्यापक रूप मा प्रदर्शनी Internacionale des Artes Decoratifs Et Industriels Modernes पेरिस मा 1925 मा मान्यता प्राप्त भएको थियो। यो शैली आधुनिकता र Bauhaus स्कूल बाट आउँछ। यो पनि रूसी रचनात्मकता बाट प्रभावित छ कि लाइनहरु र रूपहरु मा ठोसता र कठोरता को धेरै योगदान।
आर्ट डेको विशेषता के हो उनीहरु समय को प्राविधिक आविष्कारहरु लाई दिईएको महत्व हो, केहि काम तत्वहरुमा जस्तै: गगनचुम्बी भवन, बिजुली प्रकाश, रेडियो, उड्डयन आदि देखा पर्छन्। र from बाट आउँछ fauvism र यो पत्रिकाहरु र पोस्टरहरु मा देखाइएको छ कि धेरै कलाकारहरु लाई डिजाइन गरीएको छ।
आर्ट डेको मा, कलाकारहरु जस्तै:
उहाँले आफ्नो कामहरु मा बयानबाजी को उपयोग गर्दछ र आफ्नो कलात्मक व्यक्तित्व बनाए राख्छ। उहाँका कामहरु ले गोसे र खाना इलेक्ट्रीक शामिल छन्।
Cassandre एक फ्रेन्च पोस्टर कलाकार र डिजाइनर थिए। उनका कामहरु युद्ध को बीच बीसौं शताब्दी को कलात्मक avant-gardes बाट प्रभावित छन्। उहाँले कला, पाठ, र छवि जस्तै तत्वहरु संयोजन गर्न को लागी प्रयोग गर्नुभयो। उनको कामहरु को बीच बाहिर खडा: Normandie र Dubonnet।
१ 30 s० को दशक
स्रोत: आकाश मा आँखा
पहिले हामी तत्वहरु को बारे मा कुरा गरीएको छ कि हाम्रो दिन को दिन को हिस्सा हो जब हामी डिजाइन गर्दछौं, तर के तपाइँ कहिल्यै सोच्नु भएको छ जब फन्ट को डिजाइन महत्वपूर्ण हुन थाल्यो? अघिल्लो पोस्ट मा, हामी नाम एक मानिस उल्लेख Gutemberg तर सबै कुरा त्यहाँ बस्दैन। टाइपोग्राफी पनि यसको विकास र ठीक थियो, यो शताब्दी मा यो गर्न थाले XX, विशेष गरी ३० को दशक मा।
यस बर्ष को दौरान, ऐतिहासिक घटनाहरु अनुभव गरीयो र यो एक समय विभिन्न सामाजिक र राजनैतिक विचारधाराहरु को पूर्ण थियो। यस कारणका लागि, भविष्यवाद, दादावाद र अतियथार्थवाद जस्ता आन्दोलनहरु उभिए। यस बर्ष फन्टहरु जस्तै Futura वा गिल संस।
टाइपोग्राफरहरु जस्तै लेस्टर बेल वा हर्बर्ट मेटर।
एक युद्ध संघर्ष एक प्रकार को युद्ध को रूप मा परिभाषित गरीएको छ जसमा धेरै व्यक्तिहरु एक अर्का को सामना गर्दछन्, यस मामला मा युद्ध संघर्ष को बारे मा हामी कुरा गर्न जाँदैछौं, दुई देशहरु, जर्मनी र पोल्याण्ड को सामना गरीरहेको छ। यो युद्ध १ 1939 ३ in मा उत्पन्न भयो र ट्रिगर के हामी दोस्रो विश्व युद्ध को रूप मा जान्दछौं। यो मात्र दुई देशहरु को बीच एक लडाई थिएन तर यो पश्चिमी र कम्युनिस्टहरु बीच एक टकराव थियो।
र यस पटक डिजाइनरहरूले के गरे? ठिक छ, उनीहरु मध्ये धेरैले निर्वासनमा जाने छनौट गरे जबकि अन्य धेरै साहसीहरुलाई आफ्नो देश संग एकताबद्ध गर्न को लागी मजबुत बनाइयो। र युद्ध पोस्टर यो सब संग के गर्न को लागी छ? युद्ध को समय मा, विशेष गरी प्रथम विश्व युद्ध मा, युद्ध पोस्टर, जसलाई राजनीतिक वा प्रचार पनि भनिन्छ, सिर्जना गरिएको थियो। यो पोस्टर को उद्देश्य संग बनाईएको हो विश्वस्त र एकै समयमा समाज लाई हेरफेर गर्न को लागी उनीहरुलाई सरकार लाई एकीकृत गर्न को लागी.
पोस्टर धेरै थिम र टाइपोलॉजीहरु लाई पूरा गरे तर उनीहरु मध्ये, उनीहरु को लागी बाहिर उभिए:
यी पोस्टरहरु को डिजाइनरहरु के हामी बयानबाजी कल र एक अर्थपूर्ण संचार स्वर प्रयोग गरीयो, यस प्रकार को लागी अपील भावनाहरु र भावनाहरु
तिनीहरूले छवि को मनोविज्ञान को उपयोग गरीएको छ कि एक छवि मुश्किल र बिर्सन को लागी मुश्किल बनाउन को लागी
तिनीहरूले छवि भन्दा पहिले पाठ राखे, त्यो हो, पाठ धेरै अजीब शीर्षक मा यसको अजीब शीर्षक को कारण ले लीयो
उनीहरुले बोल्ड रंगहरुको प्रयोग गरी जनताको ध्यान आकर्षित गरे
तिनीहरूको मुख्य संसाधन ग्राफिक लाइन थियो, यो अन्य तत्वहरु मा केन्द्र मंच लेयो
रूसीहरु आफ्नो पोस्टर मा रचनात्मकता को उपयोग गरीयो, यस प्रकार स्थिर तत्वहरु को निर्माण
दोस्रो विश्व युद्ध संग सम्बन्धित पोस्टर, aesthetically उस्तै ग्राफिक लाइन र विशेषताहरु लाई जारी राखे। पोस्टर कलाकारहरु मध्ये जो समय मा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव थियो, निम्न बाहिर खडा:
अलेक्जेन्डर सबैभन्दा प्रतिनिधि पोस्टर कलाकार थिए, उनी ज्यामितीय आंकडाहरु कि हल्का रंग संग संगै प्रयोग गरीएको थियो। उहाँका धेरै कामहरु उनको रचना मा आन्दोलनहरु को कारण बाट जसमा उनी तत्वहरु (पाठ - छवि) superimposed सिर्जना।
उहाँका केहि कृतिहरु बाट प्राप्त: द फायर म्यान र रेचेविक।
युरोप मा 50s
स्रोत: जुआन मार्च फाउन्डेसन
यूरोप मा, विशेष गरी स्विट्जरल्याण्ड मा, धेरै आन्दोलनहरु बनाईएको थियो तर सबैभन्दा राम्रो ज्ञात निस्सन्देह मा थियो स्विस अन्तर्राष्ट्रिय शैली। यो शैली ५० को दशक मा उत्पन्न भयो र s० को दशक सम्म चलेको थियो।
प्रत्येक आन्दोलन जुन इतिहास भर मा बनाईएको थियो, अरु को तुलना मा केहि पक्षहरु मा धेरै उछाल थियो, यस मामला मा, यो शैली को क्रान्तिको शुरुआत को प्रतिनिधित्व गर्दछ सम्पादकीय डिजाइन। र के यो शैली यति धेरै विशेषता? मुख्य विशेषताहरु मध्ये एक हो कि उनीहरु रचनाहरु मा असममितता को एकीकृत गर्न को लागी व्यवस्थित, यो टाइपोग्राफिक ग्रिड र ग्रिड को उपयोग संग हासिल भएको थियो।
के उहाँ पनि विशेषता के बिना sans-serif typefaces को उपयोग र छविहरु को उपयोग र दृष्टान्त को अस्वीकृति हो। पहलुहरु कि सबै भन्दा राम्रो यो शैली संग गठबन्धन हो:
निश्चित स्पष्टता, स्पष्टता र निष्पक्षता कामहरु मा जहाँ सेन्स सेरिफ फन्टहरु प्रयोग गरीन्छ
मुख्य तत्व को रूप मा टाइपोग्राफी को प्रतिनिधित्व
समय संगै, स्विस स्कूलहरु जेनेभा, Lausanne वा ज्यूरिख जस्ता शहरहरुमा गठन गरीएको थियो।
कलाकारहरु को बीच मा जो सबैभन्दा राम्रो यो आन्दोलन को प्रतिनिधित्व गर्दछन्: थियो बाल्मर, एमिल रूडर र अधिकतम बिल।
अमेरिका मा 50s
अहिले सम्म, हामी यो निष्कर्ष निकालेको छ कि यूरोप कला र डिजाइन को दुनिया मा सबैभन्दा महत्वपूर्ण cradles मध्ये एक थियो। तर कहानी यहीं अन्त्य हुँदैन, अमेरिका को युद्ध र राजनीतिक समयमा एक महान विश्व शक्ति मानीन्थ्यो। यो प्रक्रिया शताब्दीको मध्यमा सुरु हुन्छ XX।
अमेरिकी डिजाइनरहरु को उद्देश्य यूरोपीय / स्विस शैली बाट टाढा टाढा, र उनीहरुको आफ्नै धेरै रचनात्मक र अनौपचारिक शैली बनाईएको हो। यो कसरी हामी बुझ्दछौं के रूप मा जन्म भएको थियो ग्राफिक अभिव्यक्तिवाद को अमेरिकी स्कूल।
यो स्कूल कलात्मक प्रभाव को एक सारांश थियो कि अमेरिकीहरु डिजाइन मा प्रतिनिधित्व गरे। एक धेरै अधिक प्रतिनिधि डिजाइन, ग्राफिक लाइनहरु संग मुक्त र टाढा स्थिर र नैतिक संग। उनीहरुले प्रयोग गरेका रंगहरु हड्तालकारी थिए र दर्शकलाई आक्रमण गरे र उसलाई सन्देशमा परिचय गराए। फन्ट कम ज्यामितीय थिए र यो आंकडा संग खेलेको थियो।
यो कसरी पहिलो कलात्मक प्रविधि शुरू भयो:
पप कला ढिलो १ 50 ५० को दशक मा पेश हुन थाल्यो र यसको प्रतिनिधि एक कलाकार नाम थियो एन्डी वारहोल, यद्यपि कलाकारहरु जस्तै रोय फक्स र ज्यास्पर जोन्स। यस शैली को मुख्य उद्देश्य ग्राफिक अवधारणाहरु को माध्यम बाट समय को उपभोक्ता समाज, प्राविधिक विकास र प्रगति र सेलिब्रिटीहरु बाट भरी एक सतही संस्कृति को लागी दावी को माध्यम बाट प्रतिनिधित्व गर्नु थियो।
हामी जस्तै सुविधाहरु पाउँछौं:
बोल्ड रंग र लोकप्रिय छविहरु
ग्राफिक संसाधनहरु हास्य को रूप मा प्रतिनिधित्व
साइकेडेलिया एक कलात्मक प्रविधि थियो जुन १ XNUMX ० को मध्यमा फल फलाउन थाल्यो। 60 अमेरिकामा। यो धेरै आधुनिकता र कला नोव्यू द्वारा प्रभावित भएको थियो। र यो आन्दोलन कहाँ बाट आयो? धेरै युद्धहरु र सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक द्वन्द्व पछि, धेरै कलाकारहरु लाई एक शैली सिर्जना गर्न को लागी लाग्यो कि मानव को भित्री व्यक्त गर्दछ।
यो द्वारा विशेषता छ:
अमूर्त आंकडा र पुरा तरिकाले विकृत फन्ट को उपयोग
तीन आयामी प्रभावहरु कि ड्रग्स को hallucinogenic प्रभाव पैदा
हड्ताल रंगहरु कि सामाजिक आन्दोलनहरु बाट आउँछ (हिप्पी)
५०/ /० को दशक को समयमा कलाकारहरु जस्तै साल बास र पॉल रान्ड।
यूरोप मा 60 र 70 को दशक मा डिजाइन
स्रोत: वालपेपर सुझाव
S० र Europe० को दशक यूरोप मा प्रसिद्ध द्वारा वातानुकूलित थियो शीत युद्ध। शीत युद्धले संयुक्त राज्य र युएसएसआर जस्ता देशहरु बीच टकराव शुरू गर्यो। यसले पोल्याण्ड सहित धेरै देशहरुलाई नेतृत्व गर्न थाल्यो, स्वतन्त्र हुन थाल्यो।
स्वतन्त्रता मात्र सामाजिक र राजनैतिक समस्याहरु लाई ल्याउन सकेन तर, यसको अतिरिक्त, धेरै कलाकारहरु लाई आफ्नै शैलीहरु सिर्जना गर्न थाले। यो शैली अतियथार्थवाद र कलात्मक अवधारणा «कोलाज from बाट व्युत्पन्न। तर बिन्दुमा पुगौं, दशक को दौरान सबैभन्दा प्रमुखता भएको देश इ England्गल्याण्ड थियो, जहाँ व्यक्तिगत मुक्ति को भावना उत्पन्न हुन्छ र जस्तै समूहहरु Punk.
तेसैले, अंग्रेजी शैली द्वारा डिजाइन पोस्टर को हात बाट आयो जेमी रीड। उनको पोस्टरहरु पंक आन्दोलन द्वारा सारिएको छ, यस तरीकाले ग्राफिक तत्वहरु हड़ताली र ऊर्जावान रंगहरु बाट भरिएको छ र उनी ब्यान्ड मा एक सहभागी थिए। सेक्स पिस्तौल आफ्नो एल्बम कभर को धेरै डिजाइन गर्न।
अमेरिका मा डिजाइन (१ 60 s० र १ 70 s०)
अमेरिकामा s० र s० को दशकमा, नयाँ कलाकारहरु उदय भए जहाँ अभिव्यक्तिवाद लाई धेरै महत्व दिईन्छ र यो कसरी अन्य संसाधनहरु को उपयोग गर्न को लागी छनौट गरिन्छ। फोटोग्राफी वा इन्फोग्राफिक। सबैभन्दा प्रतिनिधि कलाकारहरु मध्ये एक थियो मिल्टन ग्लेजर।
यो कलाकार १ 1929 २ in मा न्यूयोर्क मा जन्मेको थियो। उहाँले ब्रान्डि,, सम्पादकीय डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, आन्तरिक डिजाइन र दृष्टान्त जस्ता क्षेत्रहरु छुनुभयो।
१ 1966 In मा उनले समय को ग्राफिक डिजाइन को लागी सबैभन्दा प्रतिनिधि कार्यहरु मध्ये एक सिर्जना गरे: एक पोस्टर जो गायक को एल्बम मध्ये एक बाट व्युत्पन्न बब Dylan। धेरै बर्ष पछि, उनले आफ्नो सबैभन्दा प्रसिद्ध परियोजनाहरु मध्ये एक संग न्यूयोर्क पत्रिका डिजाइन: म न्यूयोर्क लाई माया गर्छु।
ग्राफिक डिजाइन मा 80s
S० को दशक को द्वारा चिन्ह लगाइएको थियो प्राविधिक अग्रिम। यसले धेरै कलाकारहरु र डिजाइनरहरुलाई आफ्नो निपटान मा कार्यक्रम को एक श्रृंखला छ कि ग्राफिक क्षेत्र मा आफ्नो काम को सुविधा को लागी अनुमति दिईयो। के हामी डिजिटल युग को रूप मा जान्दछौं, रचनाहरु र नयाँ फोटोग्राफिक र टाइपोग्राफिक प्रविधिहरु मा अध्ययन संग लोड भरीयो।
सबैभन्दा प्रतिनिधि कलाकारहरु मध्ये एक थियो वोल्फगैang Weingart।
उहाँ १ 80 s० को दशकको उत्कृष्ट टाइपोग्राफिक कलाकार मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। उहाँका डिजाइनहरु स्विस शैली बाट प्रभावित छन् र उनी धेरै कलाकारहरुको लागी प्रेरणा को स्रोत बनेका छन्। उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध ज्ञात कामहरु मध्ये: टाइपोग्राफी २ हो।
आजको समाज मा ग्राफिक डिजाइन
अब जब तपाइँ ग्राफिक डिजाइन को इतिहास को बारे मा केहि अधिक जान्नुहुन्छ। तपाइँलाई थाहा छ कि सबै विकास हरेक दिन हाम्रो डिजाइन मा जारी छ। जब एक कर्पोरेट पहिचान, एक पोस्टर, एक पत्रिका को लागी एक कभर वा जब हामी फोटो र आकर्षित को लागी डिजाइन, हामी ती कलाकारहरु जो पहिले नै आफ्नो इतिहास लेखेका छन् र आफ्नो छाप छोडेर प्रेरित हुन आवश्यक छ।
हामी अझै पनी डिजाइन २१ औं शताब्दी मा हुनेछ कि विकास थाहा छैन, तर हामी पक्का छौं कि यो सबै कलात्मक प्रविधिहरु र आन्दोलनहरु बाट बनेको छ कि हामीले तपाइँलाई पनी पनी पनी पनी पनी धन्यवाद, नयाँ विचार र रचनाहरु हुनेछन्। उदय।
हाम्रो जीवन मा केहि बिन्दु मा सबै जब हामी डिजाइन, हामी पनी स्क्र्याच बाट एक अवधारणा सिर्जना र त्यो अवधारणा हाम्रो मूल र हाम्रो विकास हो।
यस कारण को लागी, इतिहास मात्र घटनाहरु को एक श्रृंखला को रूप मा परिभाषित मात्र होईन तर विकास र व्यक्तिगत बृद्धि हो। हामी तपाइँलाई ग्राफिक डिजाइन को इतिहास को बारे मा रमाईलो र सिक्न जारी राख्न को लागी आमन्त्रित गर्दछौं।
खैर, के तपाइँ पहिले नै तपाइँको लेख्नुभएको छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन को इतिहास